Inkcazo kunye neMimiselo yokuchithwa kweNgesi ngesiNgesi
Ulwaphulo-mthetho ludumo , ifom yegama, okanye ukwakha kwegrama eveliswa ngophawu oluphambeneyo kunye nokusetyenziswa okuqhelekileyo ngaphandle komnqweno wokulungisa .
Kwezinye iimeko, ukunyanzeliswa komzimba kungumqondiso wokutshintsha ulwimi . Umzekelo, kwi- Understanding Language Usetyenziso kwiClassi (2014), uSusan Behrens ubonisa ukuba "ukuchithwa kwezinto ezifana noBani ? Uya kukhatywa ngumntu wonke.
kuya kubalelwa ngababaninzi njengamkelekileyo, echanekileyo. "
" [H] ukukhwabanisa ngokuphambili kubangelwa lubudlelwane phakathi kweentetho ezahlukeneyo okanye iilwimi - kunokuba ubuhlobo phakathi kwezi zibonwe zizivakalisi zabo.
"Kwiimeko ezininzi, izithethi zigxininisa kwimibono ephakamileyo." Ababhali beentetho ezingapheliyo bazame ukuxelisa omnye ohloniphekileyo ngokuzivumelanisa nokubhala.
"Njengomphumo weenguqu ezizodwa zengxolo kunye nokukhula okufanayo, isiNgesi kwisigaba esithile sineendlela ezimbini ezikhuphisanayo okuthiwa i- gerund , ifom ye-- ing (njengoko ihambayo ) kunye nefomu kwi -en (njengoko ihamba ) Kwixesha elizayo, iNgesi yesiNgesi yatshintshile ifom e-kwiindleko ze-e-ezininzi. ukusetyenziswa kwefomu kwi-edlalwa ngokuba 'ukulahla.' Njengezikhulumi eziyeke ukuba zizame ukuthetha i-vocation dialect, zithatha indawo yazo-ngokuya. Kwaye kwakhona, kwiimeko ezininzi zihamba kakhulu kwaye zandisa indawo yazo kumagama anjengeyithathiweyo (njengokuba ndiyithatha ). "
(Hans Henrich Hock kunye noBrian D. Joseph, Imbali yeeLwimi, utshintsho lweelwimi kunye noLwimi loLuntu .Walter de Gruyter, 1996)
"Ndivile into enhle kumshumayeli kwiveki eledlule. Uyazi umntu othile wangena emkhombeni wakhe ngethuba elidlulileyo, waza wabiba yonke into eyisikeleleyo eyayibhalwe egameni lakhe."
(UFred Lewis Pattee, iNdlu yoMnyama Omnyama: I-Romance yeZizwe ezisixhenxe , 1905)
"Wabona i-t-shirt evakalisa ukuba 'Ndingubani na oshaya iHarvard.' Ukusetyenziswa komntu 'ongasisigxina' kwesi sivakalisi ukususela kwisigama-mali sisigxina se-'arats Harvard '. Ukusetyenziswa kakubi kwamagama afanelekileyo, ukubiza amagama, okanye isakhiwo kuthiwa yi- hypercorrection . Ukuba awukwazi kakuhle indlela 'obani' ekufuneka isetyenziswe, kodwa kholelwa ukuba ihlonipheke kunokuba 'ngubani,' ungayisebenzisa.
(USusan J. Behrens noRebecca L. Sperling, "uLwimi lokuShintsha: AbaFundi nabaTitshala bavakalisa ukuphazamiseka kunye nokunyanzelisa." Ulwimi kwiLizwe leNqobo: Isingeniso kwiiLwimi , echazwe nguSusan J. Behrens noJudith A. Parker. , 2010)
"Mhlobo wam, nguwe izolo. Nabani na owathabatha le caper ngomso."
(URobert Vaughn njengoRoss Webster eSuperman III , 1983)
Ukusetyenziswa Kwam kuba Ndimi kunye Nobani
Mhlawumbi umzekelo oqhelekileyo wokuchaneka kukusebenzisa mna kumxholo wesigxina : phakathi kwakho kunye nami. Ezinye iifomu eziqhelekileyo ezichanekileyo ziquka ukuba ngubani , njengokuthi ( Yena, njengomnye umntu oqhelekileyo, wayefuna ukuphila kakuhle ukucinga ), ukuphela-apho kungengowakhe ( isahluko esincinci ), ezinye iifom zezenzi ( ukulala ukulala , kuya kuthanda ), kunye nemifanekiso eminingi. "
(WB Ebbit no-DR Ebbitt, Isikhokelo soBhali . UScott, 1978)
Wayenanto encinci ukuba athi kuCathy kunye nam .
Ngubani esimemelayo kwiqela?
"Ibinzana phakathi kwethu kunye nam ngathi sibonakala njengobungqina bonyango (kunye nokuchazwa ngesibindi njengaloo nto) ngokuqala ngokugqithiswa kwelanga lokugqibela ngabafundisi besikolo kwiimeko ezifana neziphene ezifana nokuba mna . ukuba yinto enjalo. "
(A. Sihler, Imbali Yolwimi: Isingeniso . UJohn Benjamins, 2000)
"[T] uzama ukunyanzela 'isiGrike kunye nesiLatini ezininzi ziye zaphazamisa izinto ezinobungozi ezifana ne- axia (ngaphezulu kwesinye isigxina ), i- peni , i- rhinoceri , kunye ne- [ octopi ]. kuthi ngo- octopus akuyena igama lesiLatini eliphelela ukuba litshintshele -ibubuninzi , kodwa isiGrike isiqabane (unyawo). "
(USteven Pinker, Amagama kunye neMithetho . IsiSeko, 1999)
"Ngubani oza kunika [abantwana besikolo] iimpawu ezilumkiso malunga neGramar yoxhalabileyo , ephuma kwimekoyiko engapheliyo yokucinga ukuba ayifundanga okanye ibhanali kunye neengqekembe ezifana nezinto 'ezibaluleke kakhulu,' 'wamema uMary kunye nam,' 'xa Kwaqala kuqala, 'kunye' nomphumo wokugqibela '? "
(Alistair Cooke, Umonde useMgangatho .) UAlfred A. Knopf, 1986)
"Ukwakhiwa okubalulekileyo kweNtsholongwane yeVirus [igama eliqulunqwe ngumlobi uNicolas Sobin, ngo-1997] yintsholongwane yegrama, enokucingelwa njengomgaqo wendawo ofunyanwa ngokukhawuleza (umzekelo ngexesha lokufunda). (okanye 'ilayisenisi') ukusetyenziswa kwegama lokubaluleka kolwimi olungenakulindeleka ukuba luvelise ....
"Ngokungafani nemithetho yesiqhelo yesigrama, iintsholongwane zibhekiselele kwizinto ezixubileyo. Cinga, umzekelo, ukuba kwakunjalo / ngaba ndiyakhela ngezinye izihlandlo ekusebenziseni isiNgesi ukusetyenziswa. idibanisa kumzekelo ongenakulinganiswa, ngokuya kuthi yiphi indawo ehamba phambili yokubambisana kunye necala elimangalelayo ... Singakwazi ukuphazamisa ukuba umyalelo ovumela ukuba Kuyiyo / iindidi zamagama ezidumileyo yongeza kwindlela esetyenziswa ngayo. "
(UNigel Armstrong kunye no-Ian E. Mackenzie, i- Standardization, i-Ideology kunye neeLwimi, uPalgrave Macmillan, ngo-2013)
I- Labov-hypercorrection [yinto] yeelwimi yegama elihambelana neengxaki zokungena apho i-style stratification marker yinto yokuba (ngokuqhelekileyo) iqela lesibini elona liphezulu kwiintetho zoluntu lisebenzisa imilinganiselo ephakamileyo ephezulu kwiimpawu ezisemthethweni ngokuphindaphindiweyo kunezinga eliphezulu Iqela lokuziphatha lingahunyushwa njengelisiphumo sokungakhuselekanga kweelwimi . I-Labov-hypercorrection kufuneka ihluke kwi- hypercorrection , yinto ebonakalayo yintetho yabantu ngabanye.I-Labov-hypercorrection iyigama elibangelwa yiBritish linguJC Wells, ngubani owacetyiswa ukuba kuyimfuneko ukuhlukanisa ngokukhawuleza phakathi kwe-hypercorrection nganye kunye neqela lokuhlengahlengiswa kolunye uhlobo oluchazwe nguWilliam Labov kuphando lwakhe eNew York City. "
(Peter Trudgill, i-Glossary of Sociolinguistics . I-Oxford University Press, 2003)
Ukusetyenziswa kwegama: HI-per-ke-REK-shun
Amazwi adidekile: mna kunye nam
I mpazamo yegrama
Inkcazo kunye neMimiselo yeeFomu kwiGrama